‘रमझम पूरा गर्न सांगीतिक क्षेत्रमा लागेको होइन’ - Tesro Ankha
डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सफल उद्यमीको रहरलाग्दो जीवनशैलीले गायक तथा संगीतकार दिपेश राईलाई लोभ्याउन सकेन । छोटो समयमा १९ गीतमा संगीत भरेका उनको ११ गीत रेकर्ड भइसकेको छ । नाम, दाम र सम्मान पाइने भएकाले गीत/संगीतमा भविष्य खोज्न लागिपरेका गायक तथा संगीतकार दिपेश राईसँग तेस्रो आँखा डटकमले गरेको कुराकानी :
युवापुस्ताले डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सफल उद्यमी वा विदेश गएर उच्चशिक्षा हासिल गने सपना देख्छन्, तर दिपेशचाहिँ सांगीतिक क्षेत्रलाई करिअर बनाउन लागिपरेको देखिन्छ । गीत संगीतमा लागेर दुई छाक खान घरपरिवार चलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?
डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, सफल उद्यमी र गीत/संगीतमा लागेका सबैको आ/आफ्नै अस्तित्व हुन्छ । सबैले एउटै प्रकृतिको रुचि राखे संसार निरश हुन्छ ।
भिन्नभिन्न मानिसको भिन्नभिन्न विचार हुन अस्वाभाविक होइन । गीत÷संगीतमा लागेर दुई छाक खान सक्छु भनेरै मैले यो क्षेत्रमा ला
गेको हुँ । दुई दिनको रमझम र रहर पूरा गर्नमात्रै सांगीतिक दुनियाँमा हाम्फालेको होइन ।
कुन पक्षले लोभ्याएकाले सांगीतिक क्षेत्रमा रमाउने साहस गरियो ?
गीत/संगीतमा नाम, दाम र सम्मान भएकाले सांगीतिक क्षेत्रमै भविष्य खोज्न लोभिएको हुँ ।
सांगीतिक क्षेत्र पनि खर्चिलो मानिन्छ । यस क्षेत्रमा सिक्न, टिक्न र बिक्ने सूत्र के हुन सक्छ ?
कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्दा लगानी गर्नु त छँदै छ, तातै खाउँ जलिमरूँ गर्न पनि हुँदैन । कामको पूजा गर्नुपर्छ । मिहिनेत गर्न छाड्नुहुन्न । संघर्ष गरेपछि प्रतिफल नपाउने कुरै छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा सिक्न, टिक्न र बिक्ने सूत्र त्यही हो ।
कतिपय गायक गायिका वर्षौंदेखि यही क्षेत्रमा छन् । काम गरेकै छन् तर उल्लेख्य प्रगति गर्न सकेका होइनन् । किन होला ?
गीत गाउन जानेरमात्र हुँदैन । धाउन पनि जान्नुपर्छ । समयलाई पछ्याउन सक्नुपर्छ । समय परिस्थिति बुझेर अघि बढ्न सकिएन भने सम्बन्धित गायक/गायिकाले गाएको गीत खोलाको गीतजस्तो हुन्छ । कसैले सुन्दैनन् ।
गायन तथा मोडलिङमा भविष्य खोजिरहेको दिपेशको अवस्था त्यस्तै भयो भने ?
मलाई विश्वास छ– सांगीतिक क्षेत्रमा दिपेश राईले त्यत्तिकै टेकेको होइन ।
२०७३ फाल्गुन ३० २१:३४